Ambanivolo Miakatra sy Aiñy Araiky : Tonga nijery ny vaha olana maharitra hisorohana ny tsy fanjarian-tsakafo amin’ny faritra Atsimo
vendredi, 31 décembre 2021 12:35
Nidina aty amin'ny Faritra Atsimo ny solotenan'ny fikambanana Ambanivolo Miakatra sy Aiñy Araiky, tarihan'i Zaylahy Rodriguez, nijery ety ifotony ireo vahaolana maharitra hiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny kere aty atsimo.
Ho fanamariana ny maha zava-dehibe ny firaisan-kina eo amintsika samy mpiray tanindrazana, satria « ny vohin-kava tokoa mahatratra » dia nitondra izay kely voatsirambin’ny tanana atolotra ho an’ireo « Longontika » eto amin’ny fokontany « Ampary», androany 31 desambra 2021, satria ankatokin’ny farany taona, ny fikambanana.
Rano 27 500 litatra, katsaka 120 kilao, mangahazo 120 kilao, tsaramaso 60 kilao, pakopako 2 100 isa, ary bisky 3 000 isa no nizaraina teto, izay fianakaviana 1000 mahery eo no nisitraka ireo vatsy nozaraina ireo.
Nanambara moa Zaylahy Rodriguez fa "Ampanetre-tena no hiantsoana antsika rehetra, itodika amin’ny ireo havantsika ireo, hitrotro am-bavaka azy ka hampitsiry ny fanantenana ho azy ireo, izay mieritreritra fa adino tanteraka. Ny firaisantsika hina, vatsy, aina no hery".
Tsy maintsy resentsika ny Kere, ary nirary fety sambatra ho antsika malagasy rehetra izy namaranany ny teniny.